VerbalizeIt: App, Umbhalo, Audio and Video Translation | Martech Zone
I-VerbalizeIt: Uhlelo lokusebenza, umbhalo, ukuhunyushwa komsindo nevidiyo
ISonto, Ephreli 20, 2014 Douglas Karr
I-VerbalizeIt imizamo yengxenyekazi yokuhumusha okuqukethwe kwakho okulayishiwe kuya emphakathini okhethiwe ukuze kuhunyushwe, kubuyekezwe futhi kubuyiselwe ngaphakathi kwamahora angu-24-48. Kuphela ama-10% aphezulu abafakizicelo abafanelekile abamenywa ukujoyina umphakathi wokuhumusha kanye nempendulo evela kubuholi bomphakathi weVerbalizeIt, amakhasimende kanye nokuhlolwa okuqhubekayo okusetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi bavuza abahumushi abasezingeni eliphakeme kakhulu, baqeqesha abahumushi abasezingeni eliphakeme, futhi bakhiphe abenza kabi .
I-VerbalizeIt ingasiza izinkampani ngokuhumusha kombhalo, ukuhumusha okulalelwayo, ukuhumusha ividiyo nokusiza ekuhumusheni uhlelo lwakho lokusebenza lweselula noma lewebhu. Leli yithuba elingakholeki lokuthi ibhizinisi lakho likhule emhlabeni wonke futhi lisizakale ngokusetshenziswa kwezilimi eziningi ngaphandle kokungeza izindleko zebhizinisi lomhlaba jikelele.
Tags: ukuhumushaukhulume ngomlomo
Ukuhlola i-Livefyre Sidenote yokuphawula
I-Anatomy Yomcimbi Ophelele